Maaraynta qashinka COVID ee aan habboonayn waxay kordhin kartaa faafitaanka fayraska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Maaraynta qashinka COVID ee aan habboonayn waxay kordhin kartaa faafitaanka fayraska
Caafimaadka Warka • News • Ammaanka • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Maaraynta qashinka COVID
Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Teknolojiyadda (NCBI) daraasad lagu sameeyay Mareykanka oo ku saabsan Saamaynta masiibada COVID-19 ee maareynta qashinka.
Faafida COVID-19 ayaa la sheegay inay hoos u dhigtay wasakheynta hawada iyo buuqa la xiriira deegaanka iyo hagaajinta noolaha iyo goobaha dalxiiska.
Laakiin saamaynta joogitaanka-guriga iyo tallaabooyinka ka-hortagga ee maaraynta qashinka ayaa ah mid laga naxo.
Ku guuldareysiga in si habboon loo maareeyo qashinka ka dhasha xarumaha caafimaadka iyo qoysaska ayaa laga yaabaa inay sare u qaaddo faafitaanka COVID-19.
Sababtoo ah keydinta gacmo -gashiga, goonnada, maaskaro, iyo dhar iyo qalab kale oo ilaalin ah, waxaa muuqata inay jirto xaalad deg -deg ah oo qashin ah taasoo ka dhalatay soo -saaris aan caadi ahayn oo ka timaadda qoysaska iyo xarumaha caafimaadka labadaba. Ku guuldareysiga in si habboon loo maareeyo qashinka ka soo baxa xarumaha caafimaadka iyo qoysaska ayaa laga yaabaa inay sii korodho faafitaanka COVID-19 iyada oo loo marayo gudbinta labaad.
Daadinta baahsan, gubashada furan, iyo gubiddu waxay saamayn kartaa tayada hawada iyo natiijooyinka caafimaad sababtoo ah soo -gaadhista sunta. Markaa, waxaa jira caqabad ah maaraynta qashinka aan caadiga ahayn si joogto ah iyadoo la adeegsanayo tas -hiilaadka qashinka ee jira iyadoo la yareynayo wasakhowga hawada, laga hortagayo gudbinta fayraska labaad, iyo yareynta halista caafimaad ee imaan karta.
Qashinka Hazmat waxaa loo kala saaraa bacaha gaduudan si loogu aqoonsado si fudud oo si taxaddar leh loogu tuuro Pattaya.
Pattaya waxay ku hafatay raashin qashin ah oo halis ah COVID-19
Iyada oo ku dhawaad ​​20,000 oo qof oo deggan Pattaya ay ku jiraan isbitaal ama go'doon ku yihiin guriga, dhibaatada qashinka halista ah ee magaalada ayaa si xawli ah ugu sii kordheysa kiisaska coronavirus.
Ku-xigeenka Duqa Magaalada Manote Nongyai ayaa sheegay in in ka badan 7 tan maalintii waji-xidhka, qalabka ilaalinta shaqsiyeed, nudaha, iyo qashinka caadiga ah ee bukaanku adeegsadaan ay hadda soo ururayaan. Taasi waxay isbarbar dhigaysaa kaliya 800 kiilogaraam oo qashin hazmat ah ka hor inta uusan mawjadda saddexaad ee coronavirus ku qarxin Chonburi.
Waxaa jira 2 sababood oo waaweyn oo sababa qashin -qubka. Midda koowaad waa tirada dadka hadda ku jira nooc ka mid ah daryeel caafimaad ama karantiil: 18,942 dhammaan Chonburi laga bilaabo Arbacada. Gobolku wuxuu kaloo soo sheegay 974 xaaladood oo cusub, oo ay ku jiraan 147 Degmada Banglamung, taas oo waxaa ku jira Pattaya.
Sababta labaad waa halbeegga xamaasadda leh ee ay dawladdu u adeegsatay inay wax u kala saarto “hazmat”. Asal ahaan, wax kasta oo taabtay qof tijaabiyey togan COVID-19-haddii ay yihiin astaamo iyo haddii kale-waxaa looga baahan yahay in lagu rido bac caag ah oo si gaar ah loo maareeyo loona tuuro. Taas waxaa ka mid ah waxyaabaha aan caadiga ahayn sida dhalada suugo kulul ama warqad.
Kharashka lagu tuuro bacaha cas waa mid aad u badan. Xashiishka qashinka ee Pattaya, Eastern Green World Co., ayaa ka qaada 1.5 baht halkii kiilo qashinka caadiga ah. Qashinka faafa, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku kacayaa 24 baht kiilogaraam si meesha looga saaro.
Taasi waxay horseeday “isbitaallo”-hoteello la beddelay oo daryeela bukaannada coronavirus-ka ee sida xun u xanuunsan-si ay qaawiyaan qashinkooda si ay duck u bixiyaan khidmadaha. Dalxiiska Xeebta Cholchan Pattaya waxaa la qabtay horaantii bishaan isagoo ku duubaya boorsooyinkiisa hazmat -ka guduudan bacaha qashinka caadiga ah ee madow.
Manote wuxuu sheegay in Pattaya ay dibedda u soo saartay ururinta hazmat halkii ay adeegsan lahayd Bariga Cagaaran ee Adduunka, laakiin shirkadda aan la magacaabin ayaa awoodi weyday inay la jaanqaaddo mowjadaha sii kordhaya ee bacaha cas. Markaa shaqaalaha Bariga Cagaaran ee Green waxaa loo tababaray sida loo maareeyo qashinka halista ah si ay sidoo kale u daadiyaan qashinka coronavirus.
Manote wuxuu yiri waa muhiim in dhammaan bacaha hazmat lagu ururiyo hal toddobaad gudahood, sidaa darteed waxay qaadataa wax ka badan hal shirkad si ay u sameyso.
Ku -xigeenka Duqa ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay in dadweynaha looga baahan yahay inay aad uga feejignaadaan kala -soocidda qashinka si qof kasta oo karantiil ku jiro ama gooni -u -joogga guriga uu sidoo kale u isticmaalo bacaha hazmat -ka cas.